Ibhulakufesi lesidlo sasemini ne-Cocktail - Empire Cafè Catania
Kuvaliwe: NgeSonto ntambama
Kusuka ngoMsombuluko kuze kube yiSonto ekuseni:
Ubuhle obuzokujabulisa kusukela ekuseni kuze kube sebusuku.
Amagugu we Catania abafuna ukunambitha abaningi ubuhle bazothola nganoma yisiphi isikhathi sosuku ku ibha ye-cocktail UMbuso Cafe tante amakhono gastronomic kusukela Ibhulakufesi waya ikhefu lasemini.
I-empire Cafeteria ne-Cocktail Bar: izinto eziningi zokudla kwasekuseni, ikhefu lasemini kanye nama-aperitifs
Kwasekhaya kuqale a Cataniait I-Empire Cafe Cocktail Bar isivele ikwazile ukunqoba ikhasimende elikhulu lama-gourmets ngenxa yezinhlobonhlobo eziningi nobuqiniso be imikhiqizo gastronomic kusukela ama-croissants konke i-granite, kudlula i-yummy panini futhi ucebile izifiso zokudla. Kule ndawo yomhlangano ethokomele futhi I-Cocktail Bar ungakwazi ukujabulisa ulwanga lwakho kusukela ekuseni nge cappuccino, espresso, ama-croissants, ukhilimu wekhofi, ubisi oluhlotshisiwe namanye amalungiselelo amaningi ikhekhe le-panaria.
Amakhefu amnandi wesidlo sasemini kanye nama-cocktails anekhanda
Izinhlobonhlobo ezinkulu ze panini bakulindele kulokhu iphuzu lomhlangano: sandwich nge turmeric, nge ufulawa izinhlamvu ezi-7, ufulawa Timilia, amasangweji afakiwe ngokusikaza okubandayo nemikhiqizo yekhwalithi ephezulu Uzothola nalapha ukusonga e ipizzas elimnandi yenziwe ngazo zombili Ufulawa omhlophe lelo 5 okusanhlamvu. Kuyatholakala futhi imikhiqizo gastronomic ngayinye celiac. Ku-oda, uzoba nakho pie namakhekhe. The I-Cocktail Bar iphinde inikeze abathengi bayo i-kiosk engokoqobo futhi ephumuzayo lapho ungajabulela khona iziphuzo eziningi eziqabulayo I-cocktail e i-Milkshake, ngaphezu kwama-classics amasod njengeCoca Cola, iRed Bull, ikofi likaMoah, iMonster, ubhiya kaZwelonke nezinye iziphuzo eziningi. Iphethwe ngumyeni nenkosikazi abawunakekela uqobo lo mkhiqizo wokudambisa ukudla, indawo yokudlela futhi inikezela ngomsebenzi wokuthatha indawo yokudlela kanye kwezidingo zasekhaya.
Ikheli: IVia Giacomo Leopardi, 17 (Isikhungo saseCatania)
Umakhala ekhukhwini: 345 4545011
Umakhala ekhukhwini: 347 5100206
Ifasitela lesitolo: www.kufuna-web.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 05711050871